नेतृत्वको कार्यशैलीले पार्टी ध्वस्त हुने भएकाले नयाँ पार्टी बनायौं - हिमाल दैनिक
म पशुपति शमशेर राणा संविधान संशोधनको पक्षमा छु।
२५ श्रावण २०७४, बुधबार १२:५७
एकआपसमा मिल्न पनि नसक्ने र एकले अर्कोको अस्थित्व कहिल्यै नस्विकार्ने स्वभाव पञ्चायती पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका नेताहरुको पुरानै र साझा रोग हो।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछि दरबारको साथ र सहयोगमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठन गरेर संगठित हुने कोशिश गरे पनि उनीहरूबीच सहअस्थित्वको भावना कहिल्यै आएन। त्यसैको परिणामस्वरुप उनीहरुबीच स्थायी एकता कायम हुन पनि सकेन।
दोस्रो जनआन्दोलन पछि अलग अलग नेताले अलग अलग पार्टी खोलेर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा सोचेजस्तो परिणाम आएन। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र कमल थापाको राप्रपा नेपालबीच एकता महाधिवेशन मार्फत एकीकरण भयो। त्यसपछि पार्टीको नीति, नेतृत्व, संगठन, झण्डा र निर्वाचन चिन्ह सबै थापाकै चाहना बमोजिम हुन पुग्यो। तर, नयाँ नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारका कारण पार्टी संगठनभित्र एकता र अनुशासन भन्दा झन चर्को विग्रह, विभाजन र मनमुटाव पैदा भयो।
पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयदेखि सरकारमा कसको नेतृत्वमा को को नेता सहभागी हुने भन्ने विषयमा चर्को विवाद देखिएपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा भोगेको लज्जास्पद हारको दोष एकअर्कामा थोपार्दै राप्रपा पुनःविभाजित हुन पुग्यो।
६ महिनाको अवधिमा तीन टुक्रा भएको पूर्वपञ्चहरुको नयाँ पार्टी राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)को नेतृत्व पशुपति शमशेर राणाले लिएका छन्। यसै सन्दर्भमा नवगठित पार्टीका अध्यक्ष राणासँग हिमाल दैनिक संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
लामो समयदेखि तपाईँहरूबीच भएको एकता प्रयासले एकीकरण भएको राप्रपा ६ महिना नपुग्दै फेरि किन फुट्यो?
पार्टीको मुख्य उद्धेश्य भनेकै चुनाव जित्ने हो। पार्टीको परीक्षण चुनावबाट हुने गर्छ। यसपटक हाम्रो पार्टी एकीकरण पश्चात स्थानीय तह निर्वाचन भयो। दुई चरणमा ६ वटा प्रान्तमा भएको चुनावमा पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा तेस्रो स्थानमा आउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो। तर निर्वाचनमा त्यसको ठीक उल्टो हामी छैटौं स्थानमा झर्यौं। त्यसैले हामीबीचको एकताको उद्धेश्य हाशिल भएन। यस लगत्तै प्रान्तीय र संघीय संसदको चुनाव हुँदैछ। जुन ढंगले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी गयो त्यही ढंगले अब हुने निर्वाचनमा अगाडि बढ्यौं भने पार्टी ध्वस्त हुने खतरा भयो। त्यसैले कुनै उपाय नलागेर नयाँ पार्टी खोल्न बाध्य भयौं।
दुई वटा पार्टी एक हुँदा त परिणाम झन कमजोर स्थिति देखियो भने विभाजन भएर चुनावमा जाँदा पार्टीको हालत के होला? आँकलन गर्नु भएको छ?
साधारणतयाः सबै मुलुकमा कुनै पार्टीले केही गरी चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भयो भने त्यसको नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिने गर्छ। तर, यहाँ यस्तो गरिएन। जिम्मेवारी लिएको भए सहज बाटो हुने थियो। चुनाव किन हारियो भन्दा एउटा त निर्वाचनमा पार्टी संगठनको परिचालन राम्रोसँग हुन सकेन। दोस्रो, त्यसको नेतृत्वमाथि मतदाताले विश्वास गरेनन्। त्यो परिस्थितिमा नयाँ बाटोमा गएर नयाँ नेतृत्व चयन भयो। अहिलेको संविधानको मुख्य कमजोरी के छ भने, अब हुने संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था र सम्भावना छैन। त्यसैले राजनीतिक स्थायीत्वका लागि पनि दलबीच गठबन्धनको संस्कृति विकास हुन जरूरी छ। हामी र हाम्रो पार्टी प्रजातान्त्रिक धारमा सँधै उभिएको पार्टी हो। त्यसैले हामी बृहत प्रजातान्त्रिक एकताका लागि पहल गरेर अगाडि बढ्छौं।
वास्तवमा निर्वाचनको परिणाम भन्दा पनि सरकारमा जाने वा नजाने, जाँदा कसको नेतृत्वमा जाने र संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भन्ने पार्टीभित्रको गम्भीर अन्तरविरोधका कारण पार्टी विभाजन भएको हो भन्ने कुरा कति सत्य हो?
त्यसमा पनि केही आधार छन्। पार्टीभित्र फरक मत थियो। मेरो सोचाई थियोकि, जब निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टी विधानको विषयमा फरक निर्णय दियो त्यसपछि हामी आन्दोलनमा उत्रियौं। त्यो आन्दोलनमा हामीमाथि पुलिस दमन भयो र हाम्रा धेरै नेता कार्यकर्ता घाइते भए। त्यहीबेला हामीले सरकारबाट राजीनामा गरेर सडकमा जानु पर्थ्यो। त्यो गर्न सकेको भए सायद हाम्रा लागि चुनावमा जाने राजनीतिक एजेण्डा पनि हुने थियो र निर्वाचनमा पनि अत्यन्त राम्रो परिणाम आउन सक्थ्यो। तर त्यो बेला राजीनामा गरिएन। पछि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग जुन भलै उचित कदम थिएन र पनि त्यो बेला राजीनामा गरियो जुन निर्वाचनको ठीक मुखैमा राजीनामा हुन गयो। अर्को कुरा जायज विषयमा अडान लिएर राजीनामा गरेको भए पनि यसको सन्देश पार्टी संगठनभित्र र जनतामा सही ढंगले बुझाएर लोकप्रियता हाँसिल गर्न सकिएन।
प्रधानन्यायाधीशको विषय त बहाना मात्रै हो वास्तवमा वैशाख १७ गते जब पार्टीकै १३ जना सांसदले पार्टीको ब्हिप उलंघन गर्दै संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै गोकर्ण रिसोर्टमा गएर बसे त्यसपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद र विभाजनको सम्भावनालाई मत्थर गर्न सरकारबाट बाहिरिएको होइन र?
केही साथीहरुले ब्हिप उलंघन नै गरेर गएका रहेछन्। त्यतिबेला किन त्यस्तो भयो मलाई थाहा भएन। मैले पछि उहाँहरुसँग कुरा गरेपछि मात्रै थाहा पाँए कि संशोधनको विषयमा उहाँहरुले फरकमत राखेका रहेछन्।
अहिले तपाई संविधान संशोधनको पक्षमा हो वा विपक्षमा?
तर त्यतिबेला फरकमत राखेर संशोधनको विपक्षमा उभिएकै अधिकांश सदस्यहरु अहिले तपाईसँग आउनु भएको छ त?
त्यसैले हामीले अहिलेको परिस्थितिमा सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाट वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिए पनि संविधान संशोधनको विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनौं।
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा के निर्णय भएको छ?
सरकारमा जाने बारेमा पनि अहिले निर्णय भएको छैन। समर्थन चाही गरेका छौं।
तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण भएपछि नै देशभित्र र बाहिरका कतिपय शक्तिले पार्टी विभाजनका लागि सक्रिय भएकोमा अहिले सफल भए भन्ने तपाईँहरूको पार्टीभित्र र बाहिरको चर्चामा कति सत्यता छ?
हा, हा, हा। यो कसैले फुटाउन खोजेर वा चाहेर विभाजन भएको होइन। पार्टीभित्रैका नेता कार्यकर्ताबीचको असन्तोष, पार्टी संचालन गर्ने शैली, निर्वाचन चिन्हबारे विवाद आदि विषयकै कारण हो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको चुनावमा भएको लज्जास्पद हार।
६ महिनाअघि पार्टीको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा हार्ने डरले उम्मेदवारी दिन तयार नहुने, अहिले पदका लागि पार्टी विभाजन गरेर फेरि नेतृत्व लिन चाहने कुरा कति जायज हो?
यो गलत आरोप हो। म त्यतिबेला महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिन तयार थिएँ। तर प्रकाशजी (प्रकाशचन्द्र लोहनी)ले मरे छोडिदिनु भएन। प्रकाशजी र म दुबैजना अध्यक्षमा उठ्दा जित्ने अवस्था थिएन। त्यसैले मैले छोड्नु परेको हो। मैले चाहेर छोडेको होइन।
अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ?
हाम्रो पहल बृहत प्रजातान्त्रिक एकताका लागि हुन्छ। सकिन्छ भने बृहत प्रजातान्त्रिक गठबन्धन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायीत्व दिने तर्फ केन्द्रीत रहन्छ।
तपाईँको पार्टीको पूर्व नेता सूर्यबहादुर थापाले पनि बृहत प्रजातान्त्रिक एकताको कुरा गरेका थिए। तर त्यतिबेलाका कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुनेनन्। अहिले फेरि तपाईँले यहि कुरा भनेर अघि बढ्दै गर्दा अर्को पक्षले त्यो भन्दा बलियो बृहत प्रगतिशील गठबन्धन गर्न सक्दैन र?
त्यो त नतिजाले नै देखाउला।
अहिले सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक धार भन्दा प्रगतिशील धारकै बर्चश्व देखिएको छ नि?
यसपटकको निर्वाचनमा पूर्णरुपमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील गठबन्धन भएर दुबै तर्फ गएको छैन। पूर्णरूपले गठबन्धन भएर गएपछि मात्रै थाहा हन्छ कि प्रजातान्त्रिक धार बलियो हुन्छ कि अर्को धार बलियो हुन्छ भनेर।
Prevपछिल्लोबाढी पहिरोले १३ घरमा पूर्ण क्षति
अघिल्लोजबर्जस्ती करणीबाट पीडित बालिका न्याय माग्दैNext